သားသားမီးမီးတို့ကို ဘယ်အချိန်မှာ ပျားရည်စတင်တိုက်ကျွေးသင့်လဲ???
Home Child Nutrition သားသားမီးမီးတို့ကို ဘယ်အချိန်မှာ ပျားရည်စတင်တိုက်ကျွေးသင့်လဲ???
ချစ်မေမေတို့ရေ….။ သားသားမီးမီးတို့ကို ပျားရည်တိုက်ကျွေးသင့်၊ မကျွေးသင့် အမြဲလိုလို အငြင်းပွားနေတာကို မြင်တွေ့နေရတာကြောင့်….
သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ပထမဆုံး (၁) နှစ်တာကာလဆိုတာက ချစ်မေမေတို့အတွက် အထူးဂရုစိုက်ရတဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာ ချစ်မေမေတို့က သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေ စုံစုံလင်လင်ရရှိအောင် သေချာစနစ်တကျ ကျွေးမွေးသင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ချစ်မေမေတို့အကြား အမြဲလိုလို အငြင်းပွားနေရတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို ပျားရည်တိုက်ကျွေးသင့်၊ မကျွေးသင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ တစ်နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို ပျားရည်လုံးဝလုံးဝမတိုက်ကျွေးသင့်ပါဘူး။ ပျားရည်က ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့ အစားအစာတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပေမယ့် သားသားမီးမီးတို့အတွက်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပျားရည်မှာပါဝင်တဲ့ Clostridium Botulinum ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားက သားသားမီးမီးတို့ကို အစာအဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါပဲ။ သားသားမီးမီးတို့ကို ပျားရည်တိုက်ကျွေးပြီးပြီးချင်းမှာ အစာအဆိပ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ ပြသတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ဖောရောင်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာက ချက်ချင်းမပြတတ်ပါဘူး။ တိုက်ကျွေးပြီး (၈) နာရီကနေ (၃၆) နာရီအတွင်းမှာ လက္ခဏာစပြတာပါ။
နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုက ပျားရည်မှာပါဝင်တဲ့အချိုဓာတ်ဟာ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ပါးစပ်ထဲက သွားပေါက်မှုပုံစံကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ပေါက်ပြီးသားသွားလေးတွေကိုလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ချစ်မေမေတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးကို မတော်တဆ ပျားရည်တိုက်ကျွေးမိပြီးနောက်ပိုင်း ဝမ်းချုပ်တာ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ အစားစားချင်စိတ်မရှိတာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီ အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတို့ကို ပျားရည်တိုက်ကျွေးချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့လေးတွေအသက် (၁) နှစ်ပြည့်ပြီးမှသာ တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်နော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသက် (၁) နှစ်အထက် သားသားမီးမီးလေးတွေရဲ့ အူတွေဟာ ပျားရည်ကထွက်လာတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို ကောင်းကောင်းနှိမ်နင်းနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်မေမေတို့ရေ….။ သားသားမီးမီးတို့ကို ပျားရည်တိုက်ကျွေးသင့်၊ မကျွေးသင့် အမြဲလိုလို အငြင်းပွားနေတာကို မြင်တွေ့နေရတာကြောင့် ချစ်မေမေတို့စိတ်ထဲ ဒွိဟမဖြစ်ရအောင် အခုလိုပဲ မျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ချစ်မေမေတို့လည်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
Source: timesofindia, youaremom
Previous articleမိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သမီးဖြစ်သူကို မျှဝေပေးရမယ်အရာ (၆) ခု
Next articleတစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းရဲ့ အံသြဖွယ်ကောင်းကျိုး (၈)ခု